Swoop dia mandefa sidina vaovao mankany Palm Springs avy any Edmonton
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Swoop dia mandefa sidina vaovao mankany Palm Springs avy any Edmonton
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Swoop dia mandefa sidina vaovao mankany Palm Springs avy any Edmonton.
Ny fanoloran-tenan'i Swoop amin'i Edmonton dia famantarana mazava fa misy ny fahatokisana ny drafitry ny fanarenana an'i Alberta. Ny lalana vaovao manerana an'i Kanada sy ny Palm Springs dia manokatra fahafahana mampientanentana ho an'ny fizahan-tany sy ny fandraharahana.
Ny fananana fifandraisana nitombo manerana an'i Kanada sy any ivelany amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Edmonton dia tena ilaina ho an'ny faritra.
Ny fitomboan'ny zotram-piaramanidina dia hahita ny fahafahan'ny sidina Swoop ao an-drenivohitr'i Alberta hitombo 76% raha oharina amin'ny haavon'ny pre-pandemic.
Ny fanitarana swoop manohana ny famoronana asa mivantana sy miodina 140 fanampiny ary hetsika famokarana ara-toekarena $ 120 tapitrisa amin'ny 2022.
ankehitriny, Swoop, zotram-piaramanidina Kanadiana faran'izay ambany sarany, dia nanamafy ny fanoloran-tenany amin'ny Faritr'i Edmonton Metropolitan miaraka amin'ny fanambarana ny serivisy vaovao ho an'ny toerana an-toerana iray any Etazonia sy valo avy amin'ny toby Kanadiana Andrefana. Nankalazaina androany maraina ny fampiasam-bola vaovao lehibe an'ny zotram-piaramanidina niaraka tamin'ny fampahafantarana ny fiaramanidina vaovaon'i Swoop, izay hanidina mitondra ny anarana #Edmonton.
Ho hita eo ny fitomboan'ny zotram-piaramanidina SwoopNitombo 76% ny fahafahan'ny sidina ao an-drenivohitr'i Alberta raha ampitahaina amin'ny ambaratonga talohan'ny areti-mifindra, manohana ny famoronana asa mivantana sy miodina fanampiny 140 ary asa 120 tapitrisa dolara andrasana amin'ny 2022.
“Ity dia dingana lehibe ho an'ny Swoop rehefa manasongadina ny fanoloran-tenanay hitarika ny lalana mankany amin'ny fitsangatsanganana an-dàlambe faran'izay ambany indrindra any Canada izahay ary manamafy ny toeranay amin'ny maha-mpanao zotram-piaramanidina manana ny ankamaroan'ny toerana avy any Edmonton," hoy i Charles Duncan, Filohan'ny Swoop. "Miaraka amin'ny fifantohana mafy amin'ny fitomboana sy i Edmonton amin'ny maha mpiara-miombon'antoka aminay, dia hanohy hanome sidina tsy an-kiato sy sarany faran'izay ambany kokoa ireo mpandeha izahay ary manohana ny fanarenana ny toekarena sy fizahantany any Canada."
Ny fanampin'ireo toerana Kanadiana valo vaovao amin'ny fandaharam-potoanan'ny fahavaratra an'i Swoop dia hahita serivisy tsy an-kiato avy any Edmonton mankany Charlottetown, Comox, Halifax, Kelowna, Moncton, Ottawa, Regina ary Saskatoon.
Swoop no mpitatitra voalohany hitondra fifandraisana tsy an-kiato avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Edmonton mankany Charlottetown sy Moncton ary ny fandaharam-potoanan'ny fahavaratra an'ny zotram-piaramanidina dia hahita ny famerenana amin'ny laoniny ny serivisy mankany London, Ont.
Nanomboka ny 16 desambra, nitombo ny fisian'i Swoop miampita sisintany avy any Edmonton miaraka amin'ny fanampiana serivisy vaovao Palm Springs. Ny serivisy tsy an-kiato voalahatra ho Palm Springs hiasa indroa isan-kerinandro.
Kelly Adams hoy:
November 15, 2021 amin'ny 23: 12
Azafady, aza misoratra anarana